China Stainless simbi Channel Bar Kugadzira uye Fekitori | Huaxiao
Isimbi isina chiteshi chiteshi chikamu chakaumbwa senge refu simbi, yakafanana neiyo ini danda. Yakajairika chiteshi simbi inonyanya kushandiswa mukuvaka zvivakwa, kugadzira mota.
Sino Stainless Simbi inokwana pamusoro yesimbi isina chani Channel bhaa
Saizi : 5 # - 40 #, 40 x 20 - 200 x 100
Stainless simbi bhaa yakadzama Kugadzira Maitiro Ekuongorora uye kuchenesa ingot
Kuchenesa mitsara kunosanganisira: kupfura kuputika, infrared pamusoro pekutarisa, ultrasonic kutadza kuona uye kukuya kukuya. Sezvo danho rekuenderera mberi kwekukanda richiwedzera, kana kuenderera mberi kwekukanda kuchigona kuburitsa isina hurema billet, iyo billet yekuchenesa tambo inogona kusiiwa.
Simbi isina tsvina yeAustenitic inogadzikana kana ichipisa uye haigone kusimbiswa nekudzima. Iyi mhando yesimbi ine simba rakanaka uye kuomarara, yakanakisa yakaderera tembiricha kuomarara, hapana magineti, kugadzirwa kwakanaka, kuumba uye kupisa zvinhu, asi zviri nyore kuburitsa basa kuomesa. Panguva imwecheteyo, iyi mhando yesimbi ine yakadzika kwazvo kudziyisa conductivity uye ine ductile zvakanyanya pazasi tembiricha, saka iyo yekudziya mwero inogona kukurumidza kupfuura iyo yeferritic simbi isina simbi, zvishoma zvishoma pane iyo yekudziya mwero weakajeka kabhoni simbi.
Kutenderera gomba dhizaini
Kana uchigadzira isina simbi mabara, rwakapetwa gomba mhando kazhinji rinotora iyo elliptical-kutenderera gomba mhando system. Kana uchigadzira mhando yegomba, zvinofungidzirwa kuti mhando yegomba ine simba rakachinjika, uye iyo yekutsiva gomba mhando uye iyo inotenderera mill kutangazve inoderedzwa, ndiko kuti, mhando yegomba inogona Kugadziriswa kune akasiyana zvigadzirwa, ichibvumira iyo gomba mhando uve neakakura gadziridzo, kuitira kuti chigadzirwa chese chipfuure kudzikisa gomba chimiro chinja cheiyo pre-yekupedzisa chigayo.
Kutenderera tembiricha kudzora
Kana isina simbi yakakungurutswa, kushomeka kwayo kwekushomeka kunoenderana nekuchinja kwetembiricha. Kunyanya mukuumburika kwakashata, nekuda kwekumhanya kwakaderera kumhanya, iyo tembiricha inomuka inokonzereswa nebasa re deformation haina kukwana kutsiva iyo tembiricha kudonha kweiyo rolling stock pachayo, zvichikonzera iwo muhombe musoro-kusvika-muswe tembiricha mutsauko. Chigadzirwa shiviriro ine yakashata mhedzisiro uye pamusoro pehuremara uye zvemukati kuremara zvinogona zvakare kuitika pane yakakungurutswa stock, zvichikanganisa kuenzana kweyekupedzisira chigadzirwa kuita. Kuti ugadzirise matambudziko ari pamusoro apa, billet inopisa inoiswa mukuumburuka kwakashata, yozopinda mumoto (kana gasi) wakabata choto kana choto chekudzoreredza chakatemwa pakati pekuumburana kwakashata uye iko kuputika kwepakati, uye tembiricha yakaenzana. usati wapinda wepakati rolling unit. Kutenderera. Kuitira kudzora kwakanyanya tembiricha kukwira kwezvikamu zvakakungurutswa panguva yekupedza kutenderera uye pre-kupedzisa, mudziyo unodziisa mvura (tangi remvura) unowanzo kupihwa pakati pemaseti maviri ezvigayo zvinopetwa uye pakati pekupedza chigayo chakamira. Naizvozvo, zvine mwero kudzora kweiyo saizi saizi inogona kuwanikwa kuitira kunatsiridza hunyanzvi hwekuita kwechigadzirwa chekupedzisira.
Kurapa kupisa pamhepo kwesimbi isimbi
Munguva yakapfuura, kurapwa kwekupisa kwesimbi dzesimbi kwakaitwa kunze kwenyika. Nekuvandudzwa kwesainzi uye kudzika kwekuumburudza maitiro ekutsvagisa, yemazuva ano simbi isina kupisa kupisa kurapwa kunoitwawo online. Kana uchigadzira bhawa, yesaustenitic uye ferritic simbi isina chinhu, hazvisi nyore kuburitsa kutonhora nekuzvinongedzera, kutonhora kwemhepo kana kutonhora kutonhora mushure mekuumburuka, kana mudziyo unotonhorera wemvura usati wabhururuka shear kuti uwane zvakasara kupisa kupisa; kugadzirwa Kana iri martensitic simbi isina chinhu, zviri nyore kuburitsa kutonhora kutsemuka, uye haigone kutonhodzwa zvakananga mumubhedha unotonhorera nekutonhora kwemvura. Maumbirwo emubhedha unotonhora akasiyana nemubhedha unotonhora wekugadzira kabhoni simbi. Imwe nzira ndeyekutora yakagadziriswa nhanho. Mubhedha unotonhora, senge mubhedha unotonhorera weUS Teledyne AIIvac chirimwa, icho chakagadzirwa naDanieli muItari mu1989, inoyerera ichipinda mutangi padivi rekushisa kwakanyanya. Iyo tangi inogona kuzadzwa nemvura kunyudza mubhedha unotonhora mumvura, kuitira kuti austenitic simbi isina simbi iitwe. Kudzima kwemvura, asi kwete kudzima kwemvura, kunopinda mumubhedha unotonhora. Mubhedha unotonhorera unogona zvakare kuve wakagadzirwa neyekupisa-inodziya hood kunonotsa kutonhorera kwechitenderera chinotenderera. Kana iyo insulating chifukidzo ichishandiswa kunonoka kutonhora, iyo inotonhorera mwero iri hafu yechisikigo kutonhora rate. Iyo yepasi kutonhora chiyero kwakakosha kwazvo kuti uone iyo hysteresis brittle kutsemuka kwemartensitic simbi isina simbi; imwe nzira ndeiyi: dhizaini hafu yemubhedha unotonhorera mumhando yeketani, uye imwe hafu yakajairika rack mhando yekutonhodza mubhedha. Iyo roller yekutakura inopihwa nechengetedzo yekuchengetedza kupisa. Kana iyo martensite isina simbi inogadzirwa, shears dzinobhururuka dzinocheka chidimbu chakakungurudzwa kuita mutongi wakapetwa kana kureba kwakamisikidzwa. Kana iri mutongi wakawanda, cheni yerudzi rwembhedha inotonhora inokurumidza kudhonzwa muvhavha yekuchengetedza kupisa, ndokucheka muvharo muvharo. Mutongi anozotumirwa kugomba rekutsvaira, uye mutongi akagadzika anodhonzwa akananga mugomba remhepo rinopisa kuti utonhore zvishoma.
Pashure: Stainless simbi Angle Bar
Zvadaro: Stainless simbi Hexagonal Bar
Chiteshi Bar Masayizi
Stainless Simbi Chiteshi Bar